TTSweet: အလွမ်းပြေ မုန့်
ဒီတစ်ခေါက် အိမ်ပြန်ဖြစ်တော့ မုန့်လေးတွေ အမှတ်တ၇ ဓာတ်ပုံ၇ိုက်လာခဲ့တယ်။ ဒါလေးတွေ အရင်စားနှင့်ကြဦးနော် ... နောက်တစ်ခေါက်မှ ကျန်တာတွေ ထပ်တင်ပေးဦးမယ်နော် ... မုန့်ပစ်သလက်ရယ်၊ ဟိုးအပေါ်နားက မုန့်ဗိုင်းထောင့်ရယ် အကြိုက်ဆုံး။ ခုနေများ စားရရင် ပဲဆီ မွှေးမွှေးလေးဆမ်း၊ နှမ်းထောင်းလေးဖြူး ... ရှလွတ် ... လွှတ် ကောင်းလိုက်မဲ့ ဖြစ်ခြင်း ။
ကိုလူထွေး April 8, 2009 at 3:05 AM
၅၀ တန် အစုတ်ကလေးက တီတီSweet ပေးလိုက်တာလား... တတ်နီုင်တဲ့ သူများကျတော့ ကံကောင်းသပေါ့လေ...
အလွမ်းပြေလို့မပေးဘဲ အလွမ်းပိုလို့ပေးပါလား...
Thant April 8, 2009 at 11:21 AM
အဲ...ခေါက်မုန့်နဲ့ မုန့်ဘိုင်းတောင့် ။ မမြင်ရတာအတော်ကြာပေါ့ ။ အခုလည်းမြင်သာမြင်ရ မကြင်ရ ။ ခက်ပါ့ ။
မိုးကောင်းသူ April 8, 2009 at 11:38 AM
အလွမ်းပြေ မုန့်တွေ လာစားသွားပါတယ်နော်။ မုန့်ပစ်သလက်ဆို အဖြူပဲစားတာ။ မြင်တာနဲ့ စားချင်လာပြီနော်။
သက်ဝေ April 8, 2009 at 1:40 PM
သက်ဝေ April 8, 2009 at 1:53 PM
တို့ဆီမှာ Link ထားတယ်... လို့..။
တန်ခူး April 10, 2009 at 11:36 AM
ဗိုက်ကဆာနေတာ… နှိပ်စက်လိုက်တာ ဆွိရယ်… အကုန်ကြိုက်…
Anonymous December 10, 2011 at 8:37 AM
I'd like to request you to post how to do "မုန့်ပစ်သလက်". I checked all လျှာရည်လည်စရာ ... (63) because whenever my mom wants to eat something, I firstly check yours. But this time, except this picture, no post about "မုန့်ပစ်သလက်" How-to. Thanks.